Tsy mazava ny fepetra noraisin’ny fanjakana : misy ihany ny afa-mamory vahoaka na eo aza ny pesta | NewsMada
Tsy mazava ny fepetra noraisin’ny fanjakana : misy ihany ny afa-mamory vahoaka na eo aza ny pesta
Tsy mazava hatrany am-piandohana. Rahefa iza sy inona no afaka mamory vahoaka sy manao lanonana na mamory olona ? Nilaza ny tsy hihemotra amin’ny fihaonambe sy atrikasa hataony miaraka amin’ny zanaka am-pielezana (diaspora), eny amin’ny Tanànan’ny Frankofonia, Andohatapenaka, ny faran’ny herinandro izao, ny fitondrana na eo aza ny pesta. Nambara fa hisy ny fepetra horaisina sy fandaminana hisorohana ny pesta amin’izany. Nialoha izany anefa, efa tokony ho natao teto amintsika ny fihaonambe iraisam-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana iarahana amin’i Frantsa sy ny firenena sasany, saingy nahemotra ho amin’ny volana febroary izany. Ity hetsika manokan’ny diaspora sy ny fitondrana ity anefa hatao ihany. Raharahan’ny samy malagasy ? Tsy mazava.
Hetsiky ny “taxi, tsy mila Omavet”…
Tahaka izany koa ireo lanonana na “cabaret” na “karaoke” manomboka ny zoma, asabotsy alina manerana ny tanàna. Ahoana ny momba ireny ? Notanterahina ihany ny “Salon de l’auto” teny amin’ny CCI Ivato. Nahemotra kosa ny hetsika momba ny trano fonenana, eny amin’ny Forello Tanjombato.
Tsy azo natao ny fampisehoana tetsy amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina na ny hafa koa. Fatiantoka iray lavaka ny an’ny mpikarakara. Natao ihany koa ireo lalao baolina kitra tany Fianarantsoa na Mahajanga, saingy na notsapaina hafanana ireo mpijery na koa tsy azo natrehina ny lalao. Nilaza ny hihetsika sy hihodina amin’ny tanàna toy ny efa nataony farany teo koa ny “taxi, tsy mila Omavet”, ny zoma izao, ary hitangorongorona etsy Analakely, eo anoloan’ny lapan’ny Tanàna, izy ireo. Nahazo alalana soa amantsara koa izany avy amin’ny prefektiora…
Voaporofo ny tsy fahaiza-mitantana
Tsy mahagaga raha nilaza ny eo anivon’ny sekoly katolika fa ny mpianatra ihany no zary lasibatra sy tsy afa-bela. Tsy fantatra intsony izany na afaka manao hetsika sy famoriana olona ihany rehefa misy ny fepetra sy fandrindrana na fandaminana iarahana amin’ny sehatra rehetra… Ahoana anefa izany ny eny an-tsena sy ny any am-piangonana, anaty fiara fitateram-bahoaka, ny fivorian’ny parlemantera, mariazy… Tsy mahagaga raha notebahin’ny Malagasy miara-miainga amin’ny tsy fahaizana mandrindra sy mandamina na koa miatrika izao pesta izao ny fitondrana. Misavoritaka sy tsy misy mandeha amin’ny laoniny ka hitakiana fanazavana sy mangarahara… Voaporofo ny tsy fahaiza-mitantana sy tsy fananana finiavana handray andraikitra. Eo koa ny fitavozavozana satria tsy nivonona fa tonga tampoka eo amin’ny fitondrana… Efa iainana eto isan-taona anefa na ny rivodoza na ny pesta, ankoatra ny haintany vao nanomboka tamin’ny taon-dasa.